Golaha Siyaadada ee Sudan ayaa sheegay in M/weynaha Mareykanka uu si rasmi ah u saxiixay go’aan… – Hagaag.com
Golaha Siyaadada ee Sudan ayaa sheegay in M/weynaha Mareykanka uu si rasmi ah u saxiixay go’aan…
FILE - In this Aug. 25, 2020 file photo, U.S. Secretary of State Mike Pompeo stands with Sudanese Gen. Abdel-Fattah Burhan, the head of the ruling sovereign council, in Khartoum, Sudan. Sudan’s transitional authorities are desperate to have sanctions lifted that are linked to its listing by the U.S. as a terror sponsor. That would be a key step toward ending its isolation and rebuilding its battered economy, which has plunged in recent months, threatening to destabilize the political transition.(Sudanese Cabinet via AP, File)
War qoraal ah oo loo aaneynayo inuu ka soo baxay Golaha Madax-bannaanida ee Suudaan ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha Mareykanka uu si rasmi ah u saxiixay go’aanka Suudaan looga saaray liiska dowladaha maal-geliya argagixisada.
Go’aankan ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo waxyar kadib. Bayaankan oo soo baxay maanta oo Jimce ah ayaa lagu tilmaamay munaasabada inay tahay maalin taariikhi u ah Suudaan iyo kacaankeedii barakeysnaa.
Arbacadii, Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Mike Pompeo wuxuu sheegay in Mareykanku uu bilaabay howsha uu Suudaan uga saarayo liiska dawladaha taageera argagixisada isla markaana uu “si hagar la’aan ah” uga shaqeynayo sidii Khartoum loogu riixi lahaa inay aqoonsato Israel.
Mowqifka Mareykanka ayaa yimid kadib markii Suudaan ay ku wareejisay 355 milyan oo doolar si magdhow loogu siiyo dhibanayaasha Mareykanka iyo qoysaskooda.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ka saarida Sudan liiska dowladaha kafaala qaada argagaxisada ay horseedi karto in loo dhaqaaqo aasaasida xiriirka Sudan iyo Israel, iyadoo la raacayo talaabooyin la mid ah kuwii uu garwadeenka ka ahaa Mareykanka ee Imaaraadka iyo Baxreyn.
Suudaan ayaa la geliyey liiska dowladaha maalgeliya argagixisada xilligii Madaxweynihii xukunka laga tuuray ee Cumar Al-Bashiir, waxaana ku adkaaday dowladda ku meel gaarka ah inay hesho maalgelin shisheeye ama deyn cafis deg deg ah.
Inta badan dadka reer Suudaan waxay yiraahdaan ku darista liiskan ee lagu soo rogay 1993, ayaa Washington waxay u aragtay in Al-Bashiir uu taageerayo kooxaha hubeysan, hadda waqtigeedii waa laga soo gudbay tan iyo markii Bashiir xukunka laga tuuray sanadkii hore.